Arsene Wenger Oo Sharciyo Cusub Kusoo Kordhinaya Kubadda Cagta - Waa Kuwee Qodobbada Uu Doonayo In Isbeddelka Lagu Sameeyo? - Gool24.Net
Arsene Wenger Oo Sharciyo Cusub Kusoo Kordhinaya Kubadda Cagta – Waa Kuwee Qodobbada Uu Doonayo In Isbeddelka Lagu Sameeyo?
Tababarihii hore ee Arsenal ee Wenger oo sannadkii 2018kii soo afjaray 22 sannadood oo uu tababare usoo ahaa Arsenal iyo dhamaadka xirfaddiisii macallinimo ee 34 jirsatay ayaa waxa uu hadda ka mid yahay FIFA.
Shaqadiisa FIFA oo ah inuu yahay madaxa horumarinta kubadda cagta dunida, waxa uu kulan la qaadanyaa FA Board-ka oo go’aamo ka gaadha bedelladda shuruucda iyo ikhtiraaca sharciyo cusub.
Arsene Wenger ayaa daboolka ka qaaday inuu doonayo inuu fikrado cusub iyo sharciyo kusoo kordhiyo kubadda cagta.
Waraysi uu siinayay wargeyska L’Equipe ayuu ku yidhi: “Waqtigan, waxaad ku jirtaa offside haddii qayb jidhkaagu ay ka horreysay difaaca adigoo gool dhaliyey. Waxa aan jeclaan lahaa in aanay offside noqon haddii qayb jidhkaaga ka mid ah ay difaaca ka horreyso. Waxay taasi faa’iido badan u noqon karaysaa weerarka sababtoo ah, difaacyahannada ayay ku waajibinaysaa inay si adag u ciyaaraan.”
Arsene Wenger waxa kale oo uu doonayaa in isbeddel lagu sameeyo laagga xorta ah oo loo ogolaan karo in si degdeg ah loo laadi karo.
Sidoo kale, gacan-tuurashada (tuushka) marka ay kubaddu dhinacyada garoonka ka baxo, taas oo uu tilmaamay in marka ay shan daqiiqadood ciyaarta ka hadhsan yihiin inay faa’iido u noqoto kooxda, taas oo haddii uu laacibka soo tuuray u dhiibo ciyaartoyda kooxda kasoo horjeedda uu booskiisu sii bannaan yahay, loona baahan yahay in dib loogu noqdo.
Offside-ka oo ah arrinta ugu muranka badan gaar ahaan intii lasoo kordhiyey VAR ayaa waxa uu Arsene Wenger qiray inay ka dhalatay dhibaatooyin loo baahan yahay in si degdeg ah sharraxaad iyo xal ba loogu helo.